China Drop On Glass Zviyero BS6088B Kugadzira uye Fekitori | OLAN
Nekuda kwekuvapo kwegirazi marozi pamusoro payo inoratidza mwenje wemotokari, midhudhudhu nemabhasikoro, mugwagwa wekumakisa girazi mabheji anoshandiswa kutungamira vashandisi vemugwagwa murima. Kana ......
Nekuda kwekuvapo kwegirazi marozi pamusoro payo inoratidza mwenje wemotokari, midhudhudhu nemabhasikoro, mugwagwa wekumakisa girazi mabheji anoshandiswa kutungamira vashandisi vemugwagwa murima. Kana uchityaira husiku, mwenje wemotokari unodzoserwa muziso remutyairi, saka mutyairi anogona kuona mugwagwa uri mberi zvakajeka uye otyaira zvakachengeteka. Kuti marozari adzokerezve kumashure kwechiedza, zvinhu zviviri zvinodiwa: kujeka uye kutenderera. Marozari akagadzirwa negirazi ane zvese izvi zvimiro.Kudiwa kwekujeka uye kutenderera kunogona kuoneka kuve kwakakosha kana iwe ukatevera nzira yechiedza sezvo ichipinda mubheji rakamisikidzwa munzira inoiswa chiratidzo. Iyo girazi bead inofanirwa kuve yakajeka kuitira kuti mwenje upfuure mukati uye kunze kwenzvimbo. Sezvo mwenje mwenje uchipinda mukati mebead unoburitswa nepamusoro penzvimbo yakatenderedzwa yebead iyo yakaiswa mukati mupendi. Chiedza chinorova kumusana kwependi-yakavharwa bead pamusoro inoratidzwa kubva penzvimbo yepamusoro, uye chidimbu chidiki chechiedza chinodzokera chakanangana nechivheneko.
Kuti uve nechokwadi chekuonekwa kwakanyanya mune ese mamiriro ekunze, Olan akagadzira akasiyana magirazi mabheji mabhureki akakodzera kune yega yega mhando yekushandisa.
Pane maviri akajairwa mamakisi panguva yekushandisa: Premix uye Kudonhedza-on
Premix (Intermix), yaishandiswa kusanganiswa nependi usati wabvisa mugwagwa. Sezvo marata ekupenda anopfeka, iwo marozari ari kuburitswa achipa kuwedzerwa kunoonekwa kwekuratidzwa kwemugwagwa.
Kudonhedza, kwaiwanzodonhedzwa pane ichangobva kubviswa pendi pamusoro penzira kuti ipe kukurumidza kusimudzira kuoneka kune vatyairi vehusiku.
Kuonekwa masikati pamwe nehusiku mune akasiyana mamiriro ekunze, anti-skid kuita, kupfeka kuramba uye kugadzikana hwakakosha hunhu hwemakodhi akanaka emugwagwa. Olan inogadzira mabheji egirazi emhando dzese dzemigwagwa yekumaka nzira senge solvent based- uye pendi dzemvura, thermoplastics uye maviri echikamu masystem.
Pashure: 1.7nd Magirazi eGirazi eMigwagwa yekumaka
Zvadaro: Yakapetwa Magirazi eGirazi eMigwagwa yekumaka
Drop On Glass Zviyero ZveMugwagwa Wekutara Paint
Kudonhedza Pane Rudzi rweGirazi Mabhesi
Magirazi eGirazi Tj
T446-2001 Kudonhedza Panzira Yekumaka